Wax Ka Baro Cuntoooyinka Nadiifiya Beerka. iyo Dhibaatadda Dufanka Baddan. | Hayaan News
Wax Ka Baro Cuntoooyinka Nadiifiya Beerka. iyo Dhibaatadda Dufanka Baddan.
1 Toonta: toontu waxa ay ka caawisa beerka in uu dar dar geliyo fal dedejiyaha kaas oo saara sunta, labada ugu caansani waxa weeye selenium, iyo allicin. waxa ay difaacdaa waxyaabaha khatarta ku ah beerka.
2 Liin Bambeelmada: waxay hodan ku tahay fiitamin C iyo maadada jirka sunta ka saarta ee “antioxidants”. Hal koob oo cabitaanka liin bambeelmada ah wuxuu ku filan yahay in beerka uu ka caawiyo qashin saarka.
3 Kaarootada: Cunista kaarootadu waxay hagaajisaa shaqada beerka.
4 Shaaha cagaaran: Waxaa ku jira maadada “catechins” oo caan ku ah caawinta beerka iyo qashin saaridda. Akhriso Faaidooyinka Shaaha Cagaaran.
5 Avocado: Miraha avocodo da waxay ka mid yihiin cuntooyinka loo yaqaan “Super foods”, waxay leedahay faaidooyin caafimaad oo aan lasoo koobi karin. Avocado-da waxaa ku jira maado loo yaqaano “Glutahione” oo muhiim u ah sun saarista beerka. Akhriso: faaidooyinka avocado-da.
6 Tufaaxa: Tufaaxu wuxuu horumariyaa caafimaadka beerka waxaa ku badan maado loo yaqaan “Pectin” oo ka caawisa mindhicirrada in aysan nuugin wixii jirka khatar ku ah.
7 Huruuda: Waxay u fiican tahay caafimaadka beerka. waxay caawisaa in beerku iska saaro qashinka.
8 Lowska Walnuts: Miraha lowska nooca loo yaqaan Walnuts waxaa ku jira “glutathione” iyo omega-3 Fatty acids oo caawiya nadiifinta beerka.
9 Koostada: Koostadu (spinach) waxay beerka ka caawisaa soo saarista qarasta beerka uu soo saaro taasoo muhiim u ah qashin saarka iyo dheefshiidka cuntada dufanka leh.
10 Kaabashka: kaabashka iyo broccoli-ga waxay ka mid yihiin khudaarta beerka u roon. Kaabashka waxaa kor u qaadaa shaqada waxyaabaha dheecannada burburiya ee loo yaqaan “enzymes” kuwaas oo howshoodu tahay inay qashinka beerka ka saaran.
11 Saliida saytuunka: Waxay jirka ka caawisaa sun saarista waxayna u fiican tahay beerka.
12 Liin Dhanaan: Liin dhanaanta waxaa ka buuxo fiitamin C oo sunta ka dhiga mid ku milmi karta biyaha taasoo sahlaysa in jirka laga saaro. Cabbista cabitaan liin dhanaan fresh ah aroorta hore waxay dardargelisaa shaqada beerka.
Xigasho Dr Shaahid